ခွေးများအတွက်အကောင်းဆုံး cones နှင့်၎င်းတို့၏အခြားရွေးချယ်စရာ | ခွေးကမ္ဘာ
နတ် Cerezo | 02/11/2021 11:33 | အဆင့်မြှင့်တင် 08/11/2021 16:22 | ခွေးဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
Dog cones သည် အလွန်အသုံးဝင်ပြီး လိုအပ်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်ခွေးသည် ခွဲစိတ်မှုခံယူပြီးနောက်၊ သို့သော် ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့အတွက် ခက်ခဲပြီး ဒဏ်ရာများကို အကိုက်အခဲမခံရစေရန် တားဆီးထားသော်လည်း ၎င်းတို့သည် ပုံမှန်စားသောက်ခြင်းမှ တားဆီးထားသောကြောင့် ၎င်းတို့အတွက် အလွန်ခက်ခဲပါသည်။
ထိုကွောငျ့, ဤဆောင်းပါးတွင် ခွေးများအတွက် အကောင်းဆုံးပုံးများအကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သည် စျေးကွက်တွင် သင်ရှာတွေ့နိုင်သည့် အကောင်းဆုံးသောကွန်များအကြောင်းသာ ဆွေးနွေးပါမည်။ဒါပေမယ့်လည်း အံ့သြစရာကောင်းတာက ဒီမကောင်းတဲ့အချိုရည်ကို ကျော်ဖြတ်ပြီး သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ရဲ့ဘဝကို အဆင်ပြေချောမွေ့စေမယ့် တခြားနည်းလမ်းတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ထို့အပွငျ, ငါတို့သည်လည်းသင်တို့အကြောင်းကိုဤဆောင်းပါးကိုဖတ်ပါရန်အကြံပြုပါသည်။ တိရစ္ဆာန်ဆရာဝန်ကိုကြောက်ရင် ဘယ်လိုကုသမလဲ။.
1 ခွေးတွေအတွက် အကောင်းဆုံး ကွန်ကရစ်
1.1 ကတ္တီပါနှင့် Elizabethan ကော်လာ
1.3 အနက်ရောင် ၀တ်စုံ
1.6 ချိန်ညှိနိုင်သော သိုင်းကြိုးပါသော လေဝင်လေထွက်ကောင်းသော ဖန်ခွက်
1.7 အရမ်းသက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ ကော်လာလေးပါ။
2 ငါ့ခွေးကို မင်းဘယ်တော့ ယူလာရမလဲ။
3 cones အမျိုးအစားများနှင့် အခြားရွေးချယ်စရာများ
4 ခွေး cones ကိုဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ
ခွေးတွေအတွက် အကောင်းဆုံး ကွန်ကရစ်
ကတ္တီပါနှင့် Elizabethan ကော်လာ
၏ Supet တစ်မျိုးကတော့ ...
Amazon ရှိ အကောင်းဆုံး ခွေးပုံးများထဲမှ တစ်ခုသည် PVC နှင့် velcro ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ဂန္တဝင် မော်ဒယ် ဖြစ်သည်။ တိရိစ္ဆာန်၏လည်ပင်းတစ်ဝိုက်တွင်သာ ထားရမည် (အသက်ရှူရန် နေရာအလုံအလောက်ချန်ထားရန် မမေ့ပါနှင့်) ဖြစ်သောကြောင့် ဝတ်ဆင်ရန် အလွန်လွယ်ကူပါသည်။ ဤမော်ဒယ်သည် အလွန်ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး သင့်ခွေးနှင့် အကိုက်ညီဆုံးကို ရှာဖွေရန် အရွယ်အစားများစွာကို သင်ရွေးချယ်နိုင်သည်၊ ဇယားရှိ အတိုင်းအတာများကို လိုက်နာပါ။
အချို့သော မှတ်ချက်များက ယင်းကို မီးမောင်းထိုးပြကြသည်။ အနည်းငယ်ပျော့ပျောင်းပြီး အချို့ခွေးများအတွက် တိုတောင်းသည်။. အခြားသူများကမူ ၎င်းသည် အလွန်သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး အစွန်းများကို ဖုံးအုပ်ထားသည့် အထည်သည် အလွန်အသုံးဝင်သောကြောင့် ခွေးကိုယ်တိုင် မထိခိုက်မိစေရန် အလေးပေးထားသည်။
YAMI လည်ဆွဲ ...
သင့်ခွေးအတွက် ကွဲပြားပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိသော အရာတစ်ခုခုကို လိုချင်ပါက၊ လေဝင်အောင်ပြုလုပ်ထားသော ပုံးသည် ကောင်းသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ပျော့ပျောင်းသောအထည်ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားပြီး ၎င်းသည် သင့်ခွေး၏လှုပ်ရှားမှုများကို လွယ်ကူချောမွေ့စွာ စားသောက်နိုင်စေသောကြောင့် ၎င်းသည် သင့်ခွေး၏လှုပ်ရှားမှုများကို များစွာလွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် အလွန်လွယ်ကူစွာ ဖောင်းပွပြီး မကျေမနပ်ဖြစ်ကာ သိုလှောင်မှုသို့ရောက်သောအခါ နေရာလွတ်သက်သာစေသည်။ သို့သော်၊ ခြေတံရှည်များ (ဥပမာ Dobermans၊ Dalmatians ...) သည် သင်ရှောင်ရှားလိုသောနေရာကို အလွယ်တကူရောက်ရှိနိုင်သောကြောင့် ဤပုံစံသည် ခွေးမျိုးစိတ်အားလုံးနှင့် အဆင်မပြေကြောင်း သတိပြုရမည်ဖြစ်သည်။
အထူးသဖြင့် cones တွေကြောင့် ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ခွေးပိုင်ရှင်တွေအတွက် နောက်ထပ် စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ ရွေးချယ်မှုတစ်ခုပါ။ ဤကဲ့သို့သော ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဝတ်စုံများသည် ခွေး၏လှုပ်ရှားမှုများကို ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ ဒဏ်ရာ၊ ချုပ်ရိုး သို့မဟုတ် ပတ်တီးဖြစ်စေဖြစ်စေ ဧရိယာကို ကာကွယ်ပေးသည်။ ဝတ်စုံဝတ်တဲ့အခါ ဖိအားမလွန်စေဖို့ အရွယ်အစားကို ကောင်းကောင်းရွေးချယ်ပါ။ ဤမော်ဒယ်ကို ဝါဂွမ်းနှင့် lycra တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး တစ်ချိန်တည်းတွင် ပျော့ပြောင်းပြီး လေဝင်လေထွက်ကောင်းစေသည်။
ယခင်ထုတ်ကုန်နှင့်ဆင်တူသော ခွေးများအတွက် cone ၏ နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာ။ ငါတို့ပြောသလိုပဲ၊ ခွေးတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို အရမ်းအဆင်ပြေစေတယ်။ ထို့အပြင်၊ ခွေးလေး ပေါ်ပြီးသည်နှင့် လွယ်ကူစွာ စားသောက်နိုင်ရုံသာမက ကျောပြင်ကိုလည်း ထိတွေ့မိသောကြောင့် သူ့ကိုယ်သူ သက်သာရာရစေမည်ဖြစ်သည်။ ဤမော်ဒယ်သည် ကြယ်သီးတပ်ထားပြီး သင့်ခွေးသည် အထီးဖြစ်လျှင် ဖြတ်ရမည့် စက်ဝိုင်းတစ်ခုရှိသည်။
တစ်ခါတလေ တခြားဘာမှ မလိုအပ်ပေမယ့် ဒီပုံးလေးက အဆင်ပြေပါတယ်။ အလွန်စျေးပေါသည် (€7ဝန်းကျင်)၊ ဝတ်ဆင်ရန် အလွန်လွယ်ကူပြီး တိရစ္ဆာန်၏လည်ပင်းတွင် velcro ဖြင့် ချိတ်ထားသော ပလပ်စတစ်ပုံးပါရှိသည်။. အစွန်းများကို မပွတ်မိစေရန် အထည်များဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသည်။ အချို့သော မှတ်ချက်များက ခွေးသည် အတန်ငယ် နှာတံရှည်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့ မလိုလားအပ်သော နေရာကို မရောက်စေရန် ကွန်ဒုံးသည် တားဆီးလိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။
ချိန်ညှိနိုင်သော သိုင်းကြိုးပါသော လေဝင်လေထွက်ကောင်းသော ဖန်ခွက်
နောက်ထပ်ကောင်းမွန်သော လေလုံသည့်ကော်လာမှာ ၎င်းကိုဖုံးအုပ်ထားသည့် ပျော့ပျောင်းသောအထည်ကဲ့သို့သော အခြားအလားတူလည်ဆွဲများကဲ့သို့ တူညီသောဒြပ်စင်များပါ၀င်သည်သာမက သိမ်းဆည်းရလွယ်ကူခြင်း၊ ခွေး၏ဦးခေါင်းနှင့်ကော်လာကိုချိန်ညှိရန်လက်တွေ့သိုင်းကြိုး. အရွယ်အစား M နှင့် L နှစ်မျိုးရရှိနိုင်ပြီး ဇစ်ဖုံးကို ဖယ်ရှားနိုင်သောကြောင့် အလွန်လွယ်ကူစွာ သန့်စင်နိုင်သည်။
James နဲ့ Steel လေးယောက်စလုံး...
နောက်ဆုံးတွင်၊ စာရင်းတွင်သက်တောင့်သက်သာအရှိဆုံးကော်လာဖြစ်နိုင်သည် ( recovery suits မှလွဲ၍) သည်ဤ squishy cone ဖြစ်သည်။ ဖြစ်ပါ တယ်။ နိုင်လွန်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ကော်လာတွင် ချိတ်ထားပြီး လုံးဝနှိမ့်ချနိုင်သည့် ထူးခြားချက်ရှိသည်။. ပျော့သောကြောင့် ခွေးသည် ပုံပျက်သွားသောကြောင့် အိပ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် စားသောက်နိုင်သည် ၊ နောက်ပိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းကို ပြန်ထားရန် ကြိုးစားရပေလိမ့်မည်။
ငါ့ခွေးကို မင်းဘယ်တော့ ယူလာရမလဲ။
ပုံးကို ၀တ်ဆင်ပါ။ ၎င်းသည် အလှအပဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ကျပန်းအကြောင်းပြချက်မဟုတ်သော်လည်း တိရစ္ဆာန်ဆေးဆရာမှ ညွှန်ပြရမည်ဖြစ်သည်။. ပုံမှန်အားဖြင့်၊ ခွေးများသည် cone နှစ်ခုကို ၀တ်ဆင်ရပါမည်၊
လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာ, သူတို့အပေါ်ခွဲစိတ်ပြီးပြီ။ ပုံးသည် ခွေးကို ဒဏ်ရာကို ကုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ချုပ်ရိုးများကို ဆွဲခြင်း သို့မဟုတ် ကိုက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ ဒါကြောင့် ဒဏ်ရာက ပိုကောင်းပြီး မြန်မြန်သက်သာပြီး ပိုးဝင်နိုင်ခြေကို လျော့ကျစေပါတယ်။
ဒုတိယအနေနဲ့ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်က ဒါကိုလည်း ပြောပြနိုင်တယ်။ သင့်ခွေးသည် ကုတ်ခြစ်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ရမည့် ကုသမှုကို လိုက်နာပါက ကွန်ရိုးကို ၀တ်ဆင်ရပါမည်။ သို့မဟုတ် သီးခြားဧရိယာသို့ ကိုက်ပါ။
မင်းမြင်တယ် ဤအရာနှစ်ခုသည် သင့်ခွေးကျန်းမာရေးအတွက် အလွန်အရေးကြီးသော ကိစ္စရပ်များဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့် ဤမနှစ်မြို့ဖွယ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းသည် ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်ကို ကောင်းမွန်စွာဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် ၎င်း၏မှန်ကန်သောအသုံးချပလီကေးရှင်းသည် အရေးကြီးပါသည်။
တိရစ္ဆာန်ဆေးကုသရေးအပြင်၊ cone ကို အခြားသော အခြေအနေများတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ဥပမာအားဖြင့်၊ ၎င်းတို့ကို ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်သို့ ခေါ်သွားသောအခါတွင် ကျွန်ုပ်တို့ မလိုလားသောအရာကို ကိုက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့အား အကြောက်တရားမရှိဘဲ ခြယ်လှယ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်၊ ၎င်းသည် လုံးဝသက်တောင့်သက်သာမရှိဟု မှတ်သားထားရမည်ဖြစ်သော်လည်း၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းကို သိမ်းကျုံးအသုံးပြုရန် မအကြံပြုလိုပါ။
cones အမျိုးအစားများနှင့် အခြားရွေးချယ်စရာများ
ခွေးများအတွက် cones သည် တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်တွင် သင်ရှာတွေ့နိုင်သည့် တစ်သက်တာ၏ပုံးမဟုတ်ပေ။ လောလောဆယ်၊ သင့်ခွေးအတွက် ပိုအဆင်ပြေစေမည့် မော်ဒယ်များနှင့် ရွေးချယ်စရာများ အမျိုးမျိုးရှိသည်။သူတို့ရဲ့ စရိုက်နဲ့ ဓလေ့ထုံးစံတွေအရ၊
ခါတိုင်းလို cone ပါ။ အများအားဖြင့် ပလတ်စတစ်အကြည်တွေကို ဘယ်တိရစ္ဆာန်ဆေးကုမှာမဆို ဝယ်လို့ရပါတယ်။. ၎င်းသည် အလွန်အဆင်မပြေသည့်အပြင်၊ ၎င်းသည် အသံများကို ချဲ့ထွင်ကာ ၎င်းတို့ကို ကွဲလွဲစေသည်၊ ၎င်းသည် သင့်ခွေး၏အကြားအာရုံကို များစွာထိခိုက်စေသည်၊ သို့မဟုတ် ၎င်း၏အမြင်အာရုံကို ကန့်သတ်ထားသောကြောင့် ၎င်းကို အသုံးမဝင်မီအထိ အနည်းဆုံး ဝတ်ဆင်ရန် အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားနေနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် သင်၏လှုပ်ရှားမှုများကို အလွန်ခက်ခဲစေပြီး စားရန်သောက်ရန် ခက်ခဲစေသည်။
ပျော့ပြောင်းသောပုံးများ ၎င်းတို့သည် ခွေးကို အစာနှင့် သောက်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် ပလတ်စတစ်အမာစားများအတွက် ကောင်းသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။. နောက်ပြီး ဝတ်ရတာ ပိုအဆင်ပြေတယ်။ သို့သော် သူတို့သည် ပြဿနာအချို့ကို တင်ပြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ပိုမိုပျော့ပျောင်းသောပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် အတိအကျအားဖြင့်၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဤပုံသဏ္ဍာန်သည် ၎င်း၏ပုံသဏ္ဍာန်ပျက်သွားကာ ခွေးသည် ဒဏ်ရာများဆီသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားနိုင်သည်။
၎င်းတို့သည် လေယာဉ်ပေါ်တွင် အိပ်စက်ရန်အတွက် ပုံမှန်လေလုံသည့်ကူရှင်များကို အလွန်သတိရစေသည်။ အများအားဖြင့် ဝတ်ရတာ သက်တောင့်သက်သာရှိစေဖို့ အထည်တွေနဲ့ ဖုံးအုပ်ထားပါတယ်။. ပျော့ပျောင်းသောပုံးများကဲ့သို့၎င်းတို့၏ပြဿနာကြီးမှာ မခိုင်မြဲသော်လည်း ခွေးအစာသောက်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်- ခွေးသည် မတော်တဆထိုးဖောက်ပြီး မကျေမနပ်ဖြစ်လွယ်သောကြောင့် အထူးသတိထားရန်လိုသည်။ ဖြစ်ပျက်
cones ၏စုစုပေါင်းအခြားရွေးချယ်စရာမှာပြန်လည်နာလန်ထူဝတ်စုံများဖြစ်ကြသည် ၎င်းတို့သည် ဒဏ်ရာမရအောင် ခွေးကို ၀တ်ထားသည့် အဝတ်တစ်ထည်တွင် အတိအကျ ပါ၀င်သည် ။. သင့်ခွေးသည် အဝတ်အစားများ ၀တ်ဆင်ရာတွင် အသုံးမဝင်ပါက အနည်းငယ် ရှုပ်ပွနေသော်လည်း ၎င်းတို့သည် လုံးဝလွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့်ကို ခွင့်ပြုထားသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် အတော်လေး အဆင်ပြေပါသည်။ အရမ်းကြီးလည်းမငယ်တဲ့ အရွယ်အစားကို သေချာဝယ်ပါ။
ခွေး cones ကိုဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ
၎င်းတို့သည် အလွန်မကြာခဏ ဆောင်းပါးမဟုတ်သော်လည်း ကံကောင်းထောက်မစွာပင် ခွေးများအတွက် cones များကို အမြဲတမ်း အနည်းနှင့်အများဆိုသလို အထူးပြုထားသော်လည်း၊. အသုံးအများဆုံးတွေထဲမှာ ဥပမာ-
အမေဇုံကျပန်းအရာများ၏ဘုရင်၊ သင်သည် ၎င်း၏ Prime option ကို စာချုပ်ချုပ်ဆိုပါက သင့်အိမ်တံခါးဆီသို့ သင်အလိုရှိသောပုံးကို ယူဆောင်လာမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ဖောင်းပွခြင်း၊ ပစ်မှတ်များ သို့မဟုတ် ပြန်လည်ရယူခြင်းဝတ်စုံများကဲ့သို့သော အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးရှိသည်။
အ အထူးပြုစတိုးဆိုင်များ TiendaAnimal သို့မဟုတ် Kiwoko ကဲ့သို့ ၎င်းတို့၏ စတော့တွင် ပုံးအနည်းငယ်ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် Amazon ကဲ့သို့ အမျိုးအစားများစွာမရှိသော်လည်း ၎င်းတို့၏အရည်အသွေးသည် အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး အရွယ်အစားများစွာကိုလည်း ရရှိနိုင်သောကြောင့် သင့်ခွေးနှင့် အသင့်တော်ဆုံးကို သင်ရွေးချယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ တိရိစ္ဆာန်ဆရာ ၎င်းတို့သည် ခွေးပုံးများဝယ်ရန် ဂန္ထဝင်အရှိဆုံးနေရာဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် မော်ဒယ်နည်းပါးသော မော်ဒယ်များ ရှိသော်လည်း ၎င်းတို့သည် သင်နှင့် သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကို ပိုမို စိတ်ကြိုက် အကြံဉာဏ်များ ပေးစွမ်းနိုင်သည်မှာ သေချာပါသည်။
ခွေးများအတွက် ဖန်ခွက်များတွင် အပြုသဘောဆောင်သည့် အရာတစ်ခုသာ ရှိသည်- ၎င်းတို့သည် ရက်အနည်းငယ်ကြာအောင် ကျင့်လေ့ရှိသည်။ သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၏ သက်တောင့်သက်သာရှိမှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် အရေးကြီးသည်၊ ထို့ကြောင့် ဤရွေးချယ်မှုတွင် သင့်အား ကူညီပေးမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါသည်။ သင့်ခွေးသည် သင့်ခွေးကို ၀တ်ဆင်ထားဖူးပါသလား။ ဒီလို မတူညီတဲ့ မော်ဒယ်တွေကို ဘယ်လိုထင်လဲ။ ဘယ်ဟာက မင်းရဲ့ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နဲ့ အသင့်တော်ဆုံးလဲ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခွေးကမ္ဘာကြီး » အထွေထွေခွေးများ » ခွေးဆက်စပ်ပစ္စည်းများ » ခွေးများအတွက် အကောင်းဆုံး cones နှင့် ၎င်းတို့၏ အခြားရွေးချယ်စရာများ